Wararka Maanta: Axad, Feb 3 , 2013-Ciyaartoydii ka Qaybgalay Tatankii Kubadda Kolayga ee FIBA Zone V oo casho sharaf loogu sameeyay Toronto (SAWIRRO)
Xafladaan oo si hufan loo soo agaasimay, ayna soo qabanqaabiyeen bahweynta Isboortiga ee magalada Toronto, gaar ahaan gabdhahii Kubbada Koleyga ee berisamaadkii. Casho sharaftaan waxaa ka soo qayb galay dad badan ee reer Toronto ah, bahda Isboortiga iyo qaar ka mid ah waaliddinata ciyaartoyda.
Ahmed Qalaafe oo ka mid aha culumaa’udiinka ku dhaqan Toronto , isla markaana ka mid ahaan jiray ciyaartoydii berisamaadkii ee Kubadda Koleyga ayaa ku furay aayado qur’aan ah, isagoo ciyaartoydana u jeediyay hadal kooban oo dhiirrigelin ahaa.
Sidoo kale waxaa hadallo dhiirrigalin iyo hambalyo isgu jirta ka soo jeediye Sultaan Abdirahman Olol Diinle, Xildhibaan Abdirahmaan Olol Diinle.Macaliim Abdi Dheere, iyo Sahro Geelle. Intaas kaddib waxaa hadalka lagu wareejiye ciyaartoygii xulka Qarankii ee Kubadda Koleyga.
Ciyaartoyda oo ay ka muuqatay wajiyadooda farxad ah inay matalaan xulka qaranka soomaaliya, waxeey mahad weyn u celiyeen Xoghayaha guud Saciid Faarax oo isku dubariday kooxdaan.
Ugu dambeeyntii waxaa hadalkii qaatay xoghayaha guud Saciid Faarax , wuxuuna madasha ka soo jeediyay warbixin dheer oo ku saabsaneyd sida kooxdaan loo abuuray iyo horumarka aay gaareyn.
Xoghayaha waxuu mahad ballaaran u diray shaqasiyaadkii iyo shirkadahii ku deeqay dhaqaalaha suurta galiyanaya in ay ka qayb qataan taratanka Zone V. Si gaar ah waxuu mahad u diray Al Fanaan Abdulqadir Jubba iyo Boqol, Duqa Magalad Muqadishu Tarzan, xawaalada bakaal, Xawaalada Juba Express, Juba Airways, Amaan Trading Co. Jaaliyada Reer Qatar, HIRDA, Bahda Kubadda Koleyga ee reer London. Bahda sportiga ee reer Ottawa, sido kale waxaa mahad ballaaran u diraya bulshda somaliyeed ee reer Tanzania gaar ahaan wuxuu mahad ballaaran u dir Reer Abdullaahi Nuur Garguurte,Hooyo Xabiiba Nur Ragem Saciid Shamow, Ahmed Malabaow iyo xaaskiisa Jija Camaloow, iyo Colonel Dhool.
Ugu dambeeyntii xoghayaha waxaa uu ku dhaawaaqy guddi sharfeed kala shaqeeya XSKK caqadaha dhaqaale ee hor-taagaan xulka qaranka soomlaaliyeed. Gudigaas waxaa k kooban yihiin Guddomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Ahmed Nuur Tarzan, Guddomiye ku xieggenu Mahad Abdullahi Nur iyo Saciid Shaamow, Mohmed Gedi Santur, Saciid Nuur, Abdullahi Xaaji iyo Fathu diin Ali Mohamud.
Sidoo kale wuxuu XSKK abuuray guddi gaar ah oo la shaqeeyo guddi sharafeedkaas ku xusan, waxaan ka mid Ahmed Musse Hussein , Abdulkadir Jaamac Musse Dhamme iyo Mohamed Shiikh Weli
Ugu danbeeyntii casho sharaftaas waxeey ku soo dhammaatay jawi wanaagsan.
Xafiiska Wararka Hiiraan Online
2/3/2013 6:39 AM EST